Phandeeyar Register your campaign team fora5-month hands-on Social Media Fellowship (free)
January 25, 2017 Aung Win Htut #socialimpactMM, CivicTech, Social Media Fellowship
Myanmar & English versions below
၅လကြာ (အခမဲ့) အနီးကပ် လေ့လာနိုင်သော social media fellowship အတွက် သင့် campaign အဖွဲ့ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုမှာ social media က အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မှ ပါဝင်နေပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထား၊ အယူအဆတွေအပေါ်မှာလည်း လွှမ်းမိုးဆုပ်ကိုင် နိုင်စွမ်း တိုးလာပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊ နိုင်ငံသားရေးရာကိစ္စ တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သော ဆွေးနွေးမှုများကိုမြှင့်တင်ရန် Campaign များကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် ၅လကြာ လေ့လာနိုင်တဲ့ Social Media Fellowship အစီအစဉ် တစ်ခုကို ဖန်တီးရာမှ စတင်ခေါ်ယူနေပါပြီ။
အခု အစီအစဉ်က လူမှုရေး ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတွင် Campaign ပြုလုပ်နေတဲ့ (သို့မဟုတ်) စတင်ရန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်း မှ အဖွဲ့ ဝင် နှစ်ဦးမှ သုံးဦးအထိ လျှောက်ထားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Peace ၊ Tolerance နဲ့ intercommunal harmony နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မြှင့်တင်ဖို့ campaign လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေကို လျှောက်ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများ ၊ လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့များ၊ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း အဖွဲ့များ၊ လူငယ်အုပ်စုများ၊ နဲ့ ရပ်ရွာအခြေပြု အစုအဖွဲ့ များ မှ လျှောက်ထားဖို့် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
၅လတာ ကာလအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များသည်၎င်းတို့ campaign ကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် ၊ကျွမ်းကျင်မှုအသစ် များကို လေ့လာနိုင်ရန်နဲ့ ဒီဇိုင်း များကို ကောင်းမွန်စွာ ပြု လုပ်နိုင်ရန် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့အတူ အနီးကပ်အလုပ်လုပ်ရင်းေ လ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အနီးကပ် လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးမှုများ၊ထိရောက်သောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများ အပြင်၊ ဖန်တီးရာ ရှိ Geek Squad၊ ဒီဂျစ်တယ်စတူရီယို တို့ အပါအဝင် ဖန်တီးရာရှိ အရင်းအမြစ်များကို လည်း အသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ ယခု program အောင်မြင်ပြီးဆုံးပါက ဖန်တီးရာမှပေးအပ်မယ့် social media အသိအမှတ် ပြု လက်မှတ်ရရှိပါမယ်။
(၁) Peace, Tolerance နှင့် Intercommunal harmony နှင့်ပက်သက်ပြီး campaign လုပ်ဆောင် နေတဲ့ (သို့ ) စတင်ရန် ရှိတဲ့ အဖွဲ့များ ဖြစ်ရပါမယ်။
(၂) အဖွဲ့များအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန် မလိုပါ။ သို့သော် အဖွဲ့အစည်းများသည် ယခု program ပြီးဆုံးသွားရင်လည်း campaign များဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) သင့်အဖွဲ့တွင် Peace ၊Tolerence နှင့် Intercommunal Harmony ကို အလေးထား လုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Campaign တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။
(၂) Program သည် ၅ လအချိန်ပြည့် သင်တန်းမဟုတ်သော်လည်း program တွင် ပါဝင်မည့် Workshops, Trainings များကိုမူ မပျက်မကွက် တက်ရောက်ရပါမည်။ ထို့ အပြင် သင့် Campaign မှ အဖွဲ့ဝင် နှစ်ယောက်မှ သုံးယောက်ဟာ တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး နာရီ နှစ်ဆယ် Campaign တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သူများဖြစ်ရပါမယ်။
စိတ်ဝင်စားသောအဖွဲ့များအနေဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉)ရက်မတိုင်မီ http://bit.ly/2kPQPFp ကိုနှိပ်ရ်ျ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဖွဲ့ များအနေဖြင့် ၄င်းတို့ စိတ်အားထက်သန်မှုများ၊ ၄င်းတို့ တင်ပြလာသော campaign အလားအလာ နှင့် စပ်ဆက် ပတ်သက်မှုများပေါ် အခြေခံပြီး ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါမယ်။
ကျေးဇူးပြု ရ်ျ သတိပြု ပါ။ လျောက်လွှာသည် ပြန်လည်စီစစ်ပြီး စောလျှင်စွာ လျှောက်ထားသူများကို ပဏာမရွေးချယ်ပြီး လူတွေ့စစ်ဆေးရန် ဖိတ်ခေါ်ပါမည်။ ဒါကြောင့်မို့ အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်ရစေရန် စောစောလျှောက်ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
သင်တန်းများဟာ ရန်ကုန်မြို့တွင်သာ ကျင်ပပြုလုပ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရန်ကုန်ပြင်ပ မှလျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် Travel Scholarship ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ စကောလာရှစ်သည် ခရီးစရိတ် ၊နေရာထိုင်ခင်းနှင့် စားသောက်စာရိတ်အတွက် အကြုံးဝင်ပါတယ်။
ဖန်တီးရာ ၏ website စာမျက်နှာ www.phandeeyar.org တွင် ဖန်တီးရာနှင့်ပက်သက်သော အကြောင်းအရာများနှင့် Fellowship Program နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖန်တီးရာမှ Fellowship Program လျှောက်ထားမှု ဖြစ်စဉ်နှင့်ပက်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် Information Session တစ်ခုကို ဖန်တီးရာ မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ၉ရက်နေ့ ညနေ(၆)နာရီမှ (၈)နာရီအထိ ပြု လုပ်ရန် ရှိပါတယ်။ အစီအစဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ http://bit.ly/2jUB1iY မှာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
အကယ်ရ်ျ Information Session ကိုမတက်ရောက်နိုင်ပါက Fellowship နဲ့ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ၊ လျှောက်လွှာလျှောက်ထားမှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကူအညီပေးနိုင်ရန် အတွက် ဖန်တီးရာမှ အဖွဲ့သားများကို တဦးချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန် ချိန်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုနေလင်း ဖုန်း (+ 95 95139758 ) ခေါ်ဆိုရ်ျသော်လည်းကောင်း http://bit.ly/2kPV1VD တွင် စာရင်းပေးသွင်းရ်ျ သော်လည်းကောင်း ချိန်းဆို
Facebook isadigital megaphone with incredible potential to amplify reach.
To assist change agents harness the potential of social media for campaigning, Phandeeyar is launchinga5-month Social Media Fellowship program.
The program is targeted at teams of 2-3 people already working on (or about to start)acommunity campaign tackling social issues. We’re particularly interested in campaigns promoting peace, tolerance and intercommunal harmony. Participants from CSOs, community associations, volunteer organisations, youth groups, and other community-based collectives withasocial focus are invited to apply.
Over the course of the 5-month program, the teams will work closely with local and international experts to take their campaigns to new heights and learn new skills and tools to better design and target their content.
In addition to ongoing coaching and mentoring, the teams will receiveaseries of intensive trainings as well as get access to Phandeeyar resources, including Phandeeyar Geek Squad and Digital Studio.
Participants that successfully complete the program will receiveasocial media certification from Phandeeyar.
Interested participants should register asateam before 19 February using the form below: http://bit.ly/2jYjZkr
Teams will be selected on the basis of their motivation and the relevance and potential of their proposed campaign.
Please note that applications will be reviewed and pre-selected teams invited for interview onarolling basis. We therefore recommend that you apply early to maximise your chances.
The Phandeeyar team is available to provide more information about this Fellowship and to help teams complete this Application Form. Please scheduleatime using this link
We will also be hosting an information session at Phandeeyar on Thursday, 9th February 2017 from 6pm for teams interested in finding out more about the program and application process.
You can register for the session here: http://bit.ly/2jw8pKb